ကွန်ကရစ်ရောစပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ခွဲခြား - တရုတ်ရှန်ဒေါင်း QianBaidu
ကွန်ကရစ်ရောစပ် device ကိုကွန်ကရစ်အချိုးတိုင်းတာခြင်း၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဘိလပ်မြေ, စုစုပေါင်း, ရေ, admixture, admixture နှင့်အခြားပစ္စည်းများဖြစ်ပါတယ်, ပြီးတော့အများအားကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံ (ကြမ်းပြင်) အဖြစ်လူသိများပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ကွန်ကရစ်ရောနှောထားသို့နှိုးဆော်ကြ၏။ အဓိကအားဖြင့်ပစ္စည်းအားဖြင့်ကွန်ကရစ်ရောစပ် device ကိုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုဖော်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများတိုင်းတာခြင်း, ပစ္စည်းကိရိယာများ, ပစ္စည်းများသိုလှောင်မှုပစ္စည်းကိရိယာများကိုင်တွယ်။ ဒါကြောင့်အပေါ်ပစ္စည်းများ, စုစုပေါင်း, ဘိလပ်မြေ, admixture, ရေ, သည်နှင့်အပါအဝငျ။
mobility ခွဲခြားခြင်းဖြင့် (က)
များသောအားဖြင့်တစ်ဦးလမ်းလျှောက်ကိရိယာနှင့်အတူဤသည်ရောစပ်ဘူတာရုံ, မည်သည့်အချိန်တွင်မပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါ, mobility ကောင်းလှ၏။ အဓိကအားဖြင့်ယင်းသို့ဒါအပေါ်လမ်းများ, တံတားများနှင့်အမျှတချို့ယာယီသို့မဟုတ်အလွန်အမင်းမိုဘိုင်းစီမံကိန်းများ, ရန်အဆင်ပြေအောင်။
ဘူတာရုံဖော်စပ် 2. ဖြိုဖျက်
ဤသည်ရောစပ်စက်ရုံအများအပြားကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းများကနေစုဝေးလျက်ရှိသည်ဆောက်လုပ်ရေး site ၏အပြောင်းအရွှေ့နှင့်အတူအချိန်တိုအတွင်းစုဝေးနှင့် disassembled နိုင်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့်စီးပွားဖြစ်ကွန်ကရစ်စက်ရုံများနှင့်ကြီးမားနှင့်အလတ်စားကွန်ကရစ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ကြမ်းပြင်ရောစပ် Fixed 3.
ယင်း၏နည်းပညာ၏အဆင်အပြင်အရသိရသည်ကွန်ကရစ်ရောစပ် device ကို Single-ဇာတ်စင်နှင့်အကို double-ဇာတ်စင်နှစ်ခုအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
ကွန်ကရစ်ရောစပ်ခွဲခြား၏အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းအထက်ပါနှစ်မျိုးအပြင် device ကို, ဒါပေမယ့်လည်းပစ္စည်းကိရိယာများရောစပ်အတွက် configuration ရှိမရှိနှင့်ခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းကိုသင့်ဖျော်ဘူတာရုံများနှင့်စိုစွတ်သောရောစပ်ဘူတာရုံသို့ရောစပ်ရေ add သည်နှင့်အညီ, ပစ္စည်းကိရိယာများရောစပ်၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုက်ကျွေး configure အညီ စဉ်ဆက်မပြတ်ရောစပ်ဘူတာရုံနှင့် Gap ရောစပ်ဘူတာရုံသို့ခွဲခြားထားတယ်။
Post ကိုအချိန်: ဖေဖော်ဝါရီ-08-2018